Guddi uu magacaabay Rooble oo la kulmay ehellada askari la dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Guddi uu magacaabay Rooble oo la kulmay ehellada askari la dilay
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi baaritaan ku sameeya askari dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho, waxayna la kulmeen ehellada marxuumka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddi uu Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya u magacaabay baarista kiiska askari Boliis ah oo dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa la kulmay Ehelada marxuumka, iyaga oo u balan qaaday in baaris rasmi ah dowladdu ku sameyn doonto kiiskaas.
Dilka askarigan oo dhacay toddobaadkan ayaa argagax ku reebay ehellada qoyska iyo dadkii deegaanka ku noolaa, waxaa meydkiisa laga helay god qashin! Marxuumka ayaa kamid ahaa askartii ka qeyb qaadatay gadoodkii lagu diidanaa muddo kororsiga ee dhacay bishii April ee sanadkan.
Kulane Jiis oo xigto la ah madaxweyne Farmaajo, sidoo kalena saaxiib la ah Agaasimaha hay'adda NISA Farad Yaasiin ayaa lagu eedeeyay dilka askarigan Allaha unaxariistee, waxaana guddiga uu magacaabay RW Rooble loo arkaa mid aan waxba ka qaban karin cidda geysatay falkan, iyadoo Qawda maqashii waxna ha u qaban lagu qeexay magacaabidda guddigan oo markiiba la kulmay ehellada AUN Maxamed Deeqow.
Shakhsiga sida aadka ah looga shakisan yahay laguna eedeeyay in uu dilay marxuumka ayaa ka gows-haysta labada nin ee ugu tunka weyn maamulka sare ee dalka, waxa uuna ficillada nuucan oo kale ah u fulinayaa geesinimo iyo ka war-qab ragga isaga ka sarreeya in ay ku garab taagan yihiin!